Halkay Man United Kaga Jiri Lahayd Miiska Kala Saraynta Horyaalka Premier Leaque-ga Haddii Laga Saaro Goolashii Uu Zlatan Ibrahimovic Dhibaca Ugu Soo Hooyay? - Wargane News
Home Sports Halkay Man United Kaga Jiri Lahayd Miiska Kala Saraynta Horyaalka Premier Leaque-ga...
Xidiga ree Sweden ee Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in marka uu ay da’diisu sii waynaataba uu sii fiicnaanayo isla markaana uu awood u leeyahay in uu kubbada cagta si ciyaari karo ilaa marka uu gaadho 50 sano jirka. Zlatan Ibrahimovic ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Old Traffrod isku muujiyay wuxuuna noqday xidiga dhibcaha ugu badan u soo xareeyay Manchester United 17 kii kulan ee ilaa hadda laga ciyaaray horyaalka premier Leaque-ga.
Haddaba halkay Manchester United kaga jiri lahayd miiska kala saraynta horyaalka Premier Leaque-ga hadii aan lagu xisaabin goolasha uu Ibrahimovic dhibcaha ugu keenay kooxdiisa Red Deivls?. Si aan jawaabtan u helno waxaan eegaynaa kulamadii uu Ibrahimovic goolasha ka dhaliyay ee ay goolashiisu sababta u noqdeen in kooxda Mourinho ay dhibco hesho.
Manchester United ayaa horyaalka Premier Leaque-ga kaga jiri lahayd kaalinta 12 aad oo ah booska udhexeeya Watford iyo West Ham haddii aanu Zlatan Ibrahimovic kooxdiisa udhalin 11 gool oo Premier leaque-ga ah isla markaana aanu guul ugu hogaamin kulamadii Southampton, Swansea, West Ham, Everton, Crystal Palace iyo West Brom. Man United ayaa heli lahayd 20 dhibcood oo kaliya wuxuuna Ibra si shaqsi ah masuul uga ahaa 10 dhibcood oo ay Red Devils heshay.
Waxayna hadda afar dhibcood u jirtaa kaalinta afraad ee horyaalka Premier Leaque-ga halka haddii aanu qaab ciyaareedkan soo bandhigi lahayn ay Man United ku jiri lahayd boos aad ugu liita kooxda Mourinho. Diego Costa oo kaliya ayaa ah xidiga ka horeeya Ibrahimovic ee Chelsea dhibcaha ugu badan xili ciyaareedkan u soo hooyay.